China Iphepha leRabha yeSilicone yabenzi beGlasi kunye nabathengisi | UCayce ngoMeyi
Iphepha le-silicone yerabha kumzi-mveliso weglasi yeyona nto iphambili kwinkampani yethu ezinikele ekuxhaseni iglasi elincamatheliswe ngomlilo ngokungqinelana nemfuno zentengiso.
Elaminethiweyo iglasi yokucoca iziko isebenzisa umgaqo wokucoca ulwelo, yenza iglasi ishushu phantsi kweemeko zokucoca umoya, kunye noxinzelelo lomoya, vumela iglasi kwisingxobo sokucofa icinezelwe ukukhupha umoya kwaye ingabinakho ukwenza amaqamza, ibhegi yokufunxa iphantsi kobushushu kunye neemeko zokumpompa ukwenza ezimbini okanye ezinye iziqwenga zeglasi kunye neEVA zishushu kunye.
Isikhwama sokucoca siyinxalenye engundoqo yeglasi eline-vacuum elaminethiweyo, lenza iziqwenga ezibini zerabha yentsimbi kunye nomphetho wokutywina abicah, iphepha leerabha lesilic lelona candelo liphambili kwiziko elipheleleyo, umgangatho walo uchaphazela ngqo umgangatho weemveliso zeglasi.
Amagama ahamba kunye KXM3111
Amacala amabini agudileyo
Amagama ahamba kunye KXM3112
Ingqolowa enye yelaphu
Amagama ahamba kunye KXM3122
Amagama ahamba kunye KXM3211
Amagama ahamba kunye KXM3212
Amagama ahamba kunye KXM3222
Ububanzi obukhulu bunokuba yi-3800mm ngaphandle komthungo, ubukhulu be-2-8mm, nabuphi na ubude.
Umgangatho ophezulu wezinto ze-silicone, i-elasticity ephezulu
Ubushushu obubanzi obusebenzayo ukusuka kwi-0 ukuya kwi-260 ° C
Indawo ye-0 / i-asidi / i-alkali / ioyile / amanzi / ukunxiba / ukukhusela iinyembezi
Luhlala ixesha elide, anti-ukwaluphala, non-mhlophe, ephantsi ezinokutsha
Oomatshini bokwakha, iitafile zoku-ayina, umatshini oshushu
Izixhobo zombane neze-elektroniki, iikhompyuter, iiprinta
Zomatshini, i-aerospace, impahla kunye namandla emizi-mveliso
Izitovu, izifudumezi, izitya zasekhitshini, iisinki, izixhobo zerhasi
I-chromatography ye-silica ye-gel plate, ebizwa ngokuba yi-silica gel. Yenziwe ngococeko oluphezulu lwe-chromatography ye-silica gel (umgubo) oxutywe nenani elithile le-binder kunye nelitshiziweyo. Umphezulu wayo gilasi ngokubanzi, kunye nefoyile yealuminium iyathandwa phesheya. Ukwenza umphezulu webhodi eqhotyoshelweyo.
1. Iziphumo zokuzahlula zilungile, kwaye inani lamacwecwe liphezulu.
2. Amachaphaza amancinci, alungele uhlalutyo olwenziweyo.
3. Ixesha lokwahlukana lifutshane.
4. Ukuziva okuphezulu, amabala acacileyo, ukungasasazeki
Egqithileyo Mqengqeleki Ukugquma ngerabha Strip
Okulandelayo: Iphepha leRabha leSilicone lokuCofa ukuCoca